Ilhaan Cumar oo Wajaheysa Caqabaddo cusub
Tuesday November 20, 2018 - 08:13:37 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Ilhaan Cumar oo ah Gabadh Muslimad ah ayaa kusoo biirtay Aqalka Congareska Mareykanka, waxaana ay xiran tahay Xijaab,taasoo muran badan Saacaddihii lasoo dhaafay ka dhex dhalisay Baraha Bulshadda ay ku xariirto.
Waxaa jira Sharci dhigaaya In Koongareska uusan soo fadhiisan karin qof Madax daboolan waa midda Muranka badan dhalisay sidda Sharcigaasi wax looga badelaayo, Maadaama Golaha ay kusoo biirtay Gabadh Muslimad ah oo xijaaban.
Xisbiyadda Mareykanka ayaa dadaal badan ugu jira sidii looga gudbi lahaa Caqabaddaha ay wajahayaan Gabadhaha Muslimiinta ah ee kusoo biiraya Koongareeska Mareykanka ee Xijaaban.
Sharciga in aan Madax daboolan lala soo galin Golaha Koongareeska Mareykanka ayaa jiray 181-sano
"Xubin maaha in uu yimaado aqalka oo uu madaxiisa daboolo oo uu koofiyadiisa ku hayo, mana aha inuu koofiyadiisa ku soo galo Xarunta Golaha Koongareeska Mareykanka” ayuu yiri Mid ka mid ah Siyaasiyiinta si weyn uga caansan Mareykanka.
Ilhaan Cumar Waxa ay ku qortay bogga Twitter-ka: "Qofna maro ma saaro madaxayga, laakiin waa dooqeyga , waa mid aan ku difaaco isbedelka ugu horreeya.” Waxay intaas ku dartay, "Tani ma ahan xannibaadkii ugu dambeeyay ee aan u shaqeynayo inaan kor u qaado.”